FAQs | Cangzhou Kuntai Metal zvigadzirwa Kugadzira Co, Ltd.
Semuenzaniso, nguva yekutungamira inenge mazuva manomwe. Kwekugadzirwa kwakawanda, nguva yekutungamira ndeye mazuva 15-45 mushure mekugamuchira mubhadharo wedipo. Nguva dzekutungamira dzinova dzinoshanda kana (1) tawana dhipoziti yako, uye (2) isu tabvumirwa yako yekupedzisira yezvigadzirwa zvako. Kana nguva dzekutungamira dzisingashande neyako nguva yekupedzisira, ndapota enda pamusoro pezvaunoda nekutengesa kwako. Muzviitiko zvese isu tichaedza kugovera zvaunoda. Muzviitiko zvakawanda tinokwanisa kuzviita.
Unogona kubhadhara kubhengi redu account:
Kazhinji tinogamuchira 30% T / T dhipatimendi pamberi, 70% T / T chiyero usati waendeswa.
Kana L / C pakuona.
Mamwe mazwi ekubhadhara anokwanisa kutaurirana.
Ehe, isu tinogara tichishandisa yakakwira mhando kutumira, senge standard veneer pallets kana makesi. Inyanzvi kupakata uye isiri-yakajairika zvinodiwa kurongedza zviripo asi pamwe padza imwe mari yekuwedzera.
Kuchengetedzwa kwekutakura kwezvakagadzirwa